Xildhibaanada oo ansixiyay heshiiska maxaabiis is dhaafsiga ee Hindiya iyo Somalia
Xildhibaanada golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa maanta ansixiyay heshiiska maxaabiis isu celinta ee dhex maray Soomaaliya iyo Hindiya, kaasoo ay soo saxiixday Wasaaradda Arrimaha dibadda Xukuumadda Soomaaliya.
Madaxda dowladda oo ka qeyb galay xaflad lagu soo xirayay Kalfadhiga 1aad ee Aqalka Sare
Sagal Radio Services • News Report • May 8, 2017
Nuxurka Khudbadihii ay jeediyeen musharixiinta guddoonka iyo ku xigeenada Baarlamaanka
Sagal Radio Services • News Report • January 8, 2017
Waxaa maanta xarunta golaha shacabka ka bilaabatay dhageysiga waxqabadka ay la imaan doonaan xildhibaanada u sharaxan xilalka guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa.
Waa kuma ninka ugu da’da weyn Baarlamaanka Federaalka ee noqon doona Guddoonka KMG
Xildhibaanada cusub ee labada Aqal Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in la dhaariyo, iyagoo yeelan doona kalfadhigii 1aad ee Baarlamaanka 10-aad.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u furaya kalfadhiga 7aad ee Baarlamaanka Soomaaliya, kadib markii uu fasax ku maqnaa muddooyinkan, iyadoo kalfadhigan uu yahay mid Baarlamaanka uu hor-yaallo sharciyo badan.
Xildhibaano ka digay in Xukuumada cusub lagu soo daro Xubnihii horay loo diiday ee Wasiirada ahaa
Xildhibaanada Baarlamaanka ee la baxay Kudlada Golaha Bad-baadinta Qaranka ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ka soo saaray baaq ku wajahan dhismaha xukuumada iyo xaalada dalka.
Baarlamaanka oo ogolaaday codsigii Ra’iisul Wasaaraha ee ahaa in 14-cisho Xukuumad ku soo dhiso (Akhriso Warqada)
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ogolaaday codsigii ka yimid Ra’iisul Wasaaraha ee ahaa in 14 maalmood la siiyo inuu ku soo dhiso Xukuumad tayo leh, kadib markii uu kala diray Xukuumadiisa hore, iyadoo Xildhibaanadana loo qeybiyay warqadii uu Ra’iisul Wasaaraha ka timid.